umbono ohlakaniphile we-EQ fortwo, nantsi indlela uDaimler alibona ngayo ikamva 'lokwabelana' | Iindaba zeGajethi
Umbono okrelekrele we-EQ fortwo, nantsi indlela uDaimler alibona ngayo ikamva lokwabelana ngemoto
Kukho iinkampani ezininzi ezenza i-Daimler conglomerate. IMercedes-Benz kunye ne-smart bobabini. Le yokugqibela ifuna ukubonisa nge-12 kaSeptemba, umbono wakhe othile ukuthutha. Yimodeli entsha ezimeleyo ngokupheleleyo neyombane enegama umbono onobuqili EQ fortwo.
Ekuphela kwento efana ngayo nezinye iimodeli zenkampani bubungakanani bayo obuncinci: Inguqulelo yombane kunye nokuzimela imilinganiselo ejikeleze i-2,7 yeemitha. Ukongeza, luluvo lokuqala olunokubonwa ukuba ngaphakathi kukho ukungabikho okubalulekileyo okubini: ayinaziphedi kwaye ayinalo ivili lokuqhuba.
1 Ingcinga entsha 'yokwabelana'
2 Ngombono we-smart EQ fortwo uyakuba nguMichael Knight wexesha elizayo
3 Ukunikezela ngolwazi ngaphandle nge chassis
Ingcinga entsha 'yokwabelana'
Umbono okrelekrele we-EQ fortwo uya kuba yenye ye Iimodeli ezili-10 ezaziza kufakwa nguDaimler kwimveliso yeqonga le-EQ, phakathi kwayo bekuya kuba yimoto kunye ne-SUV. Kodwa kugxilwe kule modeli, sinokukuxelela ukuba uyilo lwayo lukhethekile. Ngokuqinisekileyo iyunithi ethi ekugqibeleni ithengiswe unike kancinci ngale modeli. Kodwa asinakukhanyela ukuba sonke isixhobo sayo sibambe ingqalelo yethu.
Into yokuqala esiza kukuxelela yona yeyokuba yenzelwe yena ukuthutha okanye isithuthi ekwabelwana ngaso. Oko kukuthi, loo maqonga afana ne-car2go apho i-smart sele inenqanawa encinci yombane yeemoto ezifanelekileyo. Kwaye kuxhomekeke kwidatha ekhutshwe yile nkampani ukuba uDaimler uthembele kwesona siphakamiso sakhe sikhulu. Ngokutsho kweCar2go qho kwimizuzwana eyi-1,4 kusetyenziswa imoto evela kwizithuthi zakho. Okwangoku inabathengi abazizigidi ezi-2,6, kodwa ngesi siphakamiso senzelwe ukufikelela kwinani labasebenzisi abazizigidi ezingama-36 ngowama-2025.
Ngombono we-smart EQ fortwo uyakuba nguMichael Knight wexesha elizayo
Kwelinye icala, njengoko sikuxelele, oku umbono we-smart EQ fortwo awunavili lokuqhuba okanye iipedali. Iya kuguqulela kwisithuba esingaphakathi sabakhweli. Endaweni yezi zixhobo, kufakelwe isikrini esikhulu esine-intshi ezingama-24 kulonwabo lwabahlali-sinokuhlala kakuhle kubakhweli aba-2- kunye nezikrini ezisecaleni ze-intshi ezine.
Ngeli xesha, ngaphandle nangaphandle, umbono we-EQ fortwo ukonwabela ipaneli ye-intshi ye-44-intshi. Oku kuya kwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo ngumthengi. Kwaye kukuba enye yeenzuzo zesithuthi esizimeleyo kukuba nguye yedwa onokuya kukhangela umthengi. Umsebenzisi we ukuthutha Kuya kufuneka wazise ukuba ufuna inkonzo nge efowuni okanye ithebhulethi, elula. Koko kukuthi, Singaba nguMichael Knight wale mihla kunye neKITT.
Ukunikezela ngolwazi ngaphandle nge chassis
Kodwa ngokunikezela ngolwazi oluthe kratya malunga nesi sikrini sikhulu ngaphambili, isithuthi siya kuba nakho ukubonisa ulwazi. Eminye imizekelo iya kuba: igama lomthengi omfunayo; idilesi oya kuyo okanye unikezela ngolwazi lomdla kubahambi ngeenyawo. Kwakhona, izibane ezingasemva emotweni zinokubonelela ngolwazi ngaphandle. Banokuvela kwizilumkiso kulwazi kwimeko yezithuthi.
Ngokubhekisele kwimicimbi yobuchwephesha ngakumbi, lo mbono we-EQ fortwo unikwe amandla yi-30 kWh ibhetri ye-lithium egcwalisekayo. Asazi ngokuthe ngqo ukuzimela kwayo. Kodwa enye inzuzo yale nto kukuba xa iyunithi iphelelwe ngamandla okanye iphelisa inkonzo, iyodwa iyakukhangela isikhululo sokutshaja kwaye iqale ukunika amandla iibhetri zayo. Kuza kwenzeka njani ukuba uqhagamshele kuphela kwinethiwekhi yombane? Ewe, kuba awuyi kufuna iiplagi. Izikhululo zokutshaja ziya kuxhotyiswa ngee-induction hobs phantsi; Oko kukuthi, ayizukufuna iintambo ukuze izenzele amandla.
Okokugqibela, ndikuxelele ukuba smart ucinga yonke into. Kwaye ukhuseleko ezindleleni yenye yezona mxholo zibalulekileyo kulo mbono smart EQ fortwo. Oku kuthetha ukuba imiba enje ngenkqubo yokuvula umnyango entsha ithathelwe ingqalelo ubuninzi bayo. Zombini zityibilika kwaye zijikeleza zijikeleze i-asi engasemva inikezela ngenkangeleko yexesha elizayo. Ukongeza, le nkqubo inceda kakhulu ukufikelela kwaye igcina indawo. Kwakhona, ngokungavuli ngendlela eqhelekileyo, ngekhe kubekho bungozi bokungqubana nezinye izithuthi okanye abakhweli beebhayisikile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Umbono okrelekrele we-EQ fortwo, nantsi indlela uDaimler alibona ngayo ikamva lokwabelana ngemoto
I-MINI Electric Concept, imbonakalo yemodeli yombane eya kuvela kwi-2019